Dhimashada Shillinka Soomaaliga Maloo Aaneyn Karaa Shirkadda Hormuud? | Gaaloos.com
Home » Layaab » Dhimashada Shillinka Soomaaliga Maloo Aaneyn Karaa Shirkadda Hormuud?
Dhimashada Shillinka Soomaaliga Maloo Aaneyn Karaa Shirkadda Hormuud?
Waxyaabaha laga dhaxlo dowlad la’aanta ayey qeyb ka tahay baaba’a iyo dhimashada ku yimid Shillin Soomaaliga, ciddii doontana soo daabacado. Ganacsato iyo maamul beeleedyada dalka ka jira ayaa sidii ay doonaan u maamushay shaqadii dowladda, gaar ahaan Bankiga Dhexe, taasoo keentay in lacagtii Shlinka qiimo beel ku dhaco.
Dowladdihii KMG ee dalka soo maray iyo tii u danbeysay ee loo aqoonsaday dowlad rasmi ah, xil iskama saarin ilaalinta sharafta iyo qiimaha Shilinka Soomaaliga uu lahaa, waxaana meesha ka baxay shaqadii dowladda laheyd ee Bankiga Dhexe oo shaqadiisu aheyd ilaalinta lacagta Shilinka Soomaaliga, lasocoshada qiimaha Shilinka iyo tayadiisa.Iyadoo horayba loo aasay 500- Shilin Soomaaliga, ayaa hadda heer la aaso ku sugan 1000 Shilin, waxaana muuqda in mar dhow nalugu yeeri doono dadyow aan lacag laheyn iyo wax lagu aqoonsado.
Sanadihii u danbeeyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka waxaa laga isticmaalayay adeeg cusub oo looga maarmay in lacag jeebka lagu qaato, adeegaasi oo ay hirgelisay shirkadda isgaarsiinta Hormuud, oo loogu magac dartay EVC, kaasoo dadku u sahlaya inay wax walbo ay iibsadaan ku bixiyaan habka Transfer many ee taleefanka gacanta laga tuuro lacagta.
Adeegaani oo lacagta aad isticmaaleyso ku siinaya lacag dollar ah uguna yar tahay nus dollar, wax ka yarna uusan ku siineyn, wuxuu caqabad iyo faa’iido u keenay bulshada.
Adeega EVC ayaa daruuri ka dhigay in qof walba isticmaalo hadey ahaan laheyd kan Tuugsanaayo oo marka aad u sheegto inaadan hayn lacag caddaan ah uu kuu sheegayo inuu haysto taleefan, sidaasi darteedna ugu soo xawli karto taleefankiisa, iyo cid kasta oo rabta inay wax iibsato.
Shaki kuma jiro in shirkadda isgaarsiinta Hormuud kaalin muuqato ku leedahay horumarka dhan walbo leh ee uu dalka gaaray, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo xarunteeda ugu weyn ay ku taal Suuqa Bakaaraha iyo gargaarka dadka dhibaateysan, laakiin waxaa shirkadda Hormuud u muuqan qiimaha Shilinka Soomaaliga ee kunkii ka noolaa haddana sugaya in la aaso.
Shirkaddu waxay isu badashay bank qarsoon oo ay ku dileyso lacagtii Shilinka Soomaaliga, hase ahaatee taasi waxaa mas’uuliyadeeda dhinac ka qaadaneyso Dowladda Soomaaliya ee waqtigeeda dhamaaday, taasoo gabtay shaqadeedii iyo inay kasoo baxdo kaalinteedii laga sugyay ee ahaa inay howlgeliso Bankiga Dhexe oo lahaa kontoroolida iyo tayeynta lacagta Soomaaliya.
Shirkadda Hormuud waxaa hoostaga bankiyo ay iyadu si dadban u leedahay oo lacagta lagu keydsado dollar tahay, tan lala baxayana waa isla dollar. haddii aad u baahatana inaad la baxdo shilin Soomaali maba loo sameyn mashiinka, taasina waxay muujineysaa liitida shillinka Soomaaliga ee bankiyada ganacsi. Ajaaniibta u shaqo yimaada Muqdisho waxay Soomaaliya u haystaan Qaran aan laheyn wax lacag ah, waayo maba arkaan Shilin Soomaali.
Ugu danbeyntii Dowladda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaanada dhalinta yar ee isbadal doonka, una dhaartay dalka iyo dadka inay muujiyaan mas’uuliyad iyo xilka ay shacabka u dhaarteen, soona saaraan xeer ilaalinaayo korna u qaadaya lacagta Shilinka Soomaaliga ee booskiisa galay EVC. Ummadi haddii la rabo in la baabi’iyo waxaa laga soo maraa oo la burburiyaa dhaqankooda iyo sumadooda oo la raad gooyo.
Title: Dhimashada Shillinka Soomaaliga Maloo Aaneyn Karaa Shirkadda Hormuud?